पवित्र आत्माको अन्तरवास – Word of Truth, Nepal
मत्ती १६:१८ मा प्रभु येशूले एउटा विशेष भवन बनाउनुहुने दाबी गर्नुभयो: “…र यस चट्टानमाथि म आफ्नो ___________ ____________, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैनन्”। येशूले यी शब्दहरू बोल्नुहुँदा, यस मण्डलीको निर्माण भविष्यमा गरिने कार्य थियो। उहाँले भन्नुभयो, “म … बनाउनेछु (भविष्यत काल)”। उहाँले “म बनाउँदैछु” भन्नुभएन। यो निर्माण परियोजना पेन्टेकोस्टको दिनमा सुरु हुनेथियो।
१. मेरो निम्ति व्यक्तिगत रूपमा पवित्र आत्माको अन्तरवासको के अर्थ हुन्छ?
क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूले प्रायः यो प्रश्ना सोध्ने गर्छन्। उनीहरूको यस प्रश्न_को तात्पर्य वास्तवमा यो हो — “के तपाईंले आत्माको बप्तियस्मा पाउनुभयो, अन्य भाषा बोल्ने जस्ता क्यारिज्म्याटिक अनुभव पाउनुभयो?”
हामी त्यस आधारभूत प्रश्न मा नै फर्कौं, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” बाइबलले दिने जवाफ के हो त? १ कोरिन्थी ६:१९-२० अनुसार कोरिन्थका सबै विश्वासीहरूभित्र, अँ, शरीरअनुसार हिँड्ने विश्वासीहरू (१ कोरिन्थी ४:१-३) भित्र समेत, पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो — “के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ।” उनीहरूले पवित्र आत्मालाई नपाएका भए कसरी उहाँ उनीहरूभित्रहुन सक्नुहुन्थ्यो र? यो प्रस्ट छ, तिनीहरूले जुन घडी मुक्ति पाए त्यही घडी नै उनीहरूले पवित्र पाएका थिए।
यूहन्ना ७:३८-३९ महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्मा पाउने विषयमा त्यहाँ जे भनिएको छ त्यसमा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। विश्वास गर्नेहरू नै पाउनेहरू हुन्। यदि तपाईंले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईंले पवित्र आत्मा पाइसक्नुभएको छ। तसर्थ, चाबी प्रश्नय “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” भन्ने नभएर “के तपाईंले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो?” भन्ने हो (हेर्नुहोस् यूहन्ना १:१२)।
“पवित्र आत्मा मभित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर म कसरी जान्दछु?” क्यारिज्म्याटिक नवीकरण (Charismatic Renewal) को जवाफ छ — “पवित्र आत्माको बप्ति्स्माले अर्थात् एउटा यस्तो शक्तिशाली अनुभवले जसले यसको प्रापकलाई परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउँदछ” (रिचार्ड कबीडो, दि न्यू क्यारिज्म्याटिक्स् प्रथम संस्करण, पृष्ठ २)।
यदि कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो व्यक्ति उहाँको होइन। ऊ ख्रीष्टको होइन। ऊ एक ख्रीष्टियन होइन। यदि म मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ भने मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। म यो कसरी जान्दछु? म यो जान्दछु, किनभने परमेश्वले सो भन्नुभएको छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकले पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छन् (यूहन्ना ७:३९)। पावल भन्छन्, “हामीभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ” (२ तिमोथी १:१४) अनि यो कुरा परमेश्वरको रगतले किनिएको हरेक जनको सम्बन्धमा साँचो हुन्छ। परमेश्वरको परिभाषा (१ कोरिन्थी ६:१९, रोमी ८:९, यूहन्ना ७:३९ आदि) अनुसार ख्रीष्टियन भनेको त्यो व्यक्ति हो जसभित्र पवित्र आत्माले बास गर्नुहुन्छ अर्थात् जसले पवित्र आत्मा पाइसकेको हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनु तर पवित्र आत्मा नपाएको हुनु असम्भव कुरा हो। पवित्र आत्माको प्राप्ति र उहाँको हामीभित्रको उपस्थिति कुनै आत्मगत (subjective) र शंकास्पद अनुभवमा आधारित छैन। यो त परमेश्वरको वचनको स्पष्ट अभिव्यक्तिहरूमा आधारित छ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 21:48:542020-04-28 14:24:32पवित्र आत्माको अन्तरवास
पवित्र आत्माको पुनर्जीवन दिने...पवित्र आत्माको छाप मार्ने स�...